Mpanamboatra boaty haingam-pandeha haingam-pandeha tsara indrindra Mpanamboatra sy orinasa | Ameida
Ameida B4 series dia natao ho an'ny dokam-barotra, famantarana, fonosana ary indostrialy maro hafa. Izy io dia manana fotodrafitrasa roa miovaova, afaka miasa miaraka amin'ny fitaovana maro toy ny: fitaovana oscillating elektrika, fitaovana fanosotra, fitaovana fanapahana oroka, fitaovana V-fanapahana, router manerantany fitaovana, fitaovana tapaka manerantany sns. Amin'ny rafitry ny fakan-tsary CCD, azonao atao tsara ny manapaka ireo fitaovana vita pirinty. Maherin'ny 10 taona ny traikefa amin'ny indostria dia mahatonga ny volavolan'ny masininay sy ny kalitaony any amin'ny kilasy voalohany any Shina, ny ampahany lehibe rehetra dia avy any Japon, Alemana, Netherlands sns, ny fiainam-panompoana milina dia mihoatra ny 10 taona, ny fampiasam-bola indray mandeha dia hitondra anao maharitra tombony, Miaraha aminay ary tompony ny milina fanapahana Ameida voalohany anao.
Ny modularité miavaka amin'ny vahaolana fanapahana anay dia safidy tsara indrindra. Azonao atao foana ny manamboatra ny rafitra Ameida B4 hifanaraka amin'ny fepetra vaovao amin'ny fanovana sy fanavaozana. Ny foto-kevitr'i Ameida momba ny famolavolana modular dia ahafahanao manamboatra vahaolana haingo namboarina natao mifanaraka amin'ny filan'ny famokarana manokana. Ameida cutters dia fampiasam-bola azo antoka ary manome fitazonana soatoavina faran'izay betsaka.
Miaraka amin'ny fiheverana miabo sy mahomby amin'ny tombotsoan'ny mpanjifa, manatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra ny orinasanay mba hifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa ary mifantoka bebe kokoa amin'ny fiarovana, ny fahamendrehana, ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana ary ny fanavaozana ho an'ny haingo dizitaly Multi-Function avo lenta avo lenta any Shina. Rehefa nandroso izahay, dia manohy manara-maso ireo laharan-javatra tsy mitsaha-mitombo ary manatsara ny serivisinay
Teo aloha: Label Die Cutter - C5 Series
Digital Cutter ho an'ny taratasy
Mpanapaka lamba nomerika
Mpanapaka taratasy nomerika